Ambohibao, Ambatolampy, Talatamaty: tapaka telo andro ny rano, mimenomenona ny mponina | NewsMada
Ambohibao, Ambatolampy, Talatamaty: tapaka telo andro ny rano, mimenomenona ny mponina
Hatry ny alarobia teo, tapaka ny rano eny amin’ny faritra Ambohibao manontolo hatrany Talatamaty sy ny manodidina rehetra iny. Tsy misy fanazavana azon’ny mponina hatramin’izao. Fahirano ny tanàna amin’iny toerana be orinasa sy be mponina iny.
Andro aman’alina ny fiandrasana ny ranon’ny Jirama, saingy tsy misy izany na kely aza. Mitandahatra amin’ny paompim-pokonolona ireo daba mavo efa ho telo andro izao. Ireo manana vovon-drano no hany mizara amin’ny fiarahamonina manodidina azy mba hivelomana.
Ny sasany koa anefa, manao izany ho lasa fitadiavam-bola mihoa-pampana ka manararaotra ny tsy fisian-drano ary mivarotra 200 Ar ny iray daba mavo. Ny hafa kosa, mifampitsinjo amin’ny fiarahamonina ka mizara maimaimpoana izany.
Ny siniben-dranon’ny Jirama ihany koa, tsy misy rano akory fa napetraka nibahana toerana fotsiny eny akaikin’ny fokontany nametrahana azy.
Manao antso avo amin’ny tompon’andraikitry ny Jirama ny mponina amin’iny faritra Ambohibao hatreny Talatamaty manontolo iny hitady vahaolana haingana hamerenana ny rano fa mijaly ny olona.
Omaly, nisy ihany koa ny fahatapahan-drano teto Antananarivo toy ny teny Ambohijatovo, teny Antaninarenina, teny Faravohitra, teny Ambatonakanga, teny Ambohitsorohitra… vokatry ny fanamboarana natao teny Mandroseza.